Horn Cable TV – Aqoonta iyo Diinta ugu Hiili Xaqa : Qore Maxamed Cali Bile
Bangiga marka ad lacag ka amaahato kaa qaadaya 20% dulsaar ah oo haddii ad la habsaantana kaa xaraashaya aqalka caruurtu kuu degentahay iyo Bangiga marka ad lacag ka amaahato 3% dulsaar ah kaa qaadaya, labaduba ribo ayey qaadanayaan magaca ay doonaan ha u bixiyeene. Dulsaarka oo ad magaca ka bedeshaa kuu xalaaleyn maayo ribada. Macnaha ribadu maaha magaca, balse waa sababta ka danbeysa ee loo xaaraantimeeyey oo ah inaan dadka lagu dhibin deynta la amaahiyo.
Bangiga ad ka amaahatey $1,000 ee ku yidhi sannad gudihii ku bixi $1,200 iyo bangiga ku amaahiyey $1,000 ee ku yidhi sannad gudihii ku bixi $1,030, kee ayaa culeys badan ku saarey? Labadooda, bangiga hore ayaa culeys badan ku saarey. Sababta ad marka hore amaahda u qaadateyba waa lacag la’aan. Haddaad lacag heysato bangiba deyn maad weydiisateen. Labadaa bangi oo ad u kala hiilisaana adiga oo adeegsanaya magac aqooneed amma magac diimeedna libin ku gaadhsiin meyso.
Laba kooxood oo wadaado ah ayaa maanta olole ka wada Hargeysa. Qolo waxa ay ka soo horjeedaa in baarlamaanku ansixiyo sharciga bangiyada iyaga oo diidan in bangiyo ajinabiya oo ribo qaadanayaa yimaadaan dalka, difaacayana bangiyada iminka dalka ka jira ee qaata dulsaarka ka badan 20%. Halka ay koox kale oo wadaado ihina ay u ololeynayaan in xeerkaasi la ansixiyo oo bangiyo kale la furo. Labada kooxood midkoodna uuma doodayo dadka masaakiinta ah ee dulsaarka laga qaadayo iyo dadka kale ee dulmiga badani ku heysto dalka dhexdiisa. Labada kooxoodba waxa ay u doodayaan ganacsato dheregtey. Labada qoloba marka ay mabda’ooda kaa dhaadhicinayaan waxa ay ku doodayaan iney dalka iyo Diinta u hiilinayaan. Balse hadaba waxa kaaga muuqanaya xamaasadooda iyo waxa xiiq ka dhacaya in arintu dal iyo diin ka baxsantahay.
Xaaraani Waa Xaaraan. Amma Qadhiidh amma Cantuug.